Noocyada iyo Suuqgeynta Mawduucyada: Ka taxaddar buunbuunin | Martech Zone
Michael Brito, Ku-xigeenka Sare ee kartida leh ee Qorshaynta Ganacsiga Bulshada ee Edelman Digital (iyo dhammaanba hareeraha ukunta wanaagsan), dhawaan ka qoray laba magac kuwaas oo si xoog leh ugu wareejinaya inta badan suuqgooda suuq geynta xarumaha warbaahinta.
Waxaan u arkaa inay dhiirrigelin tahay in kuwa hore shirkado u korsada ay u beddelayaan istiraatiijiyaddooda suuq-geyn waxyaabaha ay ka dhigayaan barxadda guud ee guud, ka qaybqaadashada. Hase yeeshe isbeddelkan, si kastaba ha noqotee, waxaa jira isbeddello kale oo suuq-geyn ah oo ay tahay inaan raacno isha muhiimka ah, oo aan ku jahwareerin warbaahinta shirkadaha Saxaafadda.
Waxaa jira isbeddel weyn oo ka dhacaya warshadaha suuqgeynta, waxayna leedahay laba qaybood. Midka koowaad waa sheekada socota ee ku saabsan wax walba suuq-geynta, taas oo iyaduna, illaa xad, ay weheliso fikradda ah sheeko wax ku ool ah.
Qaybta labaad waa fikradda ah saxafiga brand, in magacyadu ay noqon karaan bixiyeyaal warbaahineed, ma aha oo kaliya nuxurka iyo sheekooyinka diiradda saaraya badeecada ama adeegga calaamadda, laakiin waxay u dhaqmaan sidii xarumo warbaahin. Shirkaduhu waxay ku hoosjiraan sixitaanka isbeddelka xaragada leh ee warbaahinta dhaqameed, iyo madax-bannaanida saxafiga runta ah, ee loogu talagay boqortooyada dhijitaalka ah. Si lama filaan ah, qof kastaa waa muwaadin muwaadin ah (taas oo ah wax aan micno lahayn).
Coca Cola dhawaan sameeyey cinwaanada iyagoo riixaya inay ku sharxaan goobahooda shirkadeed joornaalka macaamiisha, oo ay shidaal u siiyeen in ka badan 40 qoraayaal madaxbanaan, sawir qaadayaal, iyo kuwa kale. Hadda waxay noqotaa mid xiiso leh qayb ahaan sababtuna tahay qaadashadooda taas oo ah "il lagu kalsoonaan karo", waxay waqti ku bixin doonaan waqti habab fikradaha ra'yiga ah ee laga yaabo inaysan si toos ah ula jaan qaadi karin waxyaabaha ku habboon astaanta.
Tani waa halka aan ka fiirsado, iyo marka laga reebo. Calaamadaha kiisas badan maanta waxay fahamsan yihiin in si wax ku ool ah loo tartamo, waa inay ugu yaraan bixiyaan adeegga bushimaha illaa arrimaha u dhexeeya joogtaynta deegaanka, xuquuqda aadanaha. Qeyb ka mid ah ballanqaadkan mas'uuliyadda bulshada waxay muujineysaa in shirkaddu ay si adag u eegto ganacsigooda, oo ay ka shaqeyso hagaajinta halka ay ku habboon tahay dhaqankooda ganacsi. Marka la eego dhibaatooyinkii hore ee ay Coca Cola ku qabatay Hindiya iyo Afrika halkaasoo wakiilnimada biyaha ay ahayd arrin muhiim ah, ma aanan fileynin in dadaal badan uu ka muuqdo goobta Safarka. Laakiin waan qaldamay.
Coca Cola waxay dadaal xoog leh galisay ka hadalka arintaan, iyo waliba baakadaha waara, saamaynta beeraha, iwm. Waxaan kugu dhiiri galin lahaa inaad aqriso Warbixinta Waara ee 2012.
Hadda tani waa bilow fiican, waxaanan ku amaanayaa shirkadda Coca Cola inay ku darto macluumaadkaas. Laakiin maahan saxafiga brand. Waa inaanan waligeen isku qaldin sheeko shaqsiyeed sheekooyinka waalidiinta iyo caruurtooda, sheekooyinka aan aqrino ugana doodno meelaha cibaadada, sheekooyinka qoysaskeena.
Tallaabada xigta ee weyn ee loo qaadayo Coca Cola waxay noqon doontaa in la dhiso barxad ay ka dhacaan arrimaha noocan oo kale ah xagga hore iyo bartamaha, halkaas oo bulshada macaamiisha, dhaqdhaqaaqayaasha, iyo deriska ay is dhexgalaan. Waxaan sidoo kale soo gudbin lahaa in wakiilka macaamiisha uu noqdo mid joogto ah oo bulshadaan ka mid ah, iyo in la siiyo ismaamul ay haa haayaan xanuun mararka qaar.
Haddii shirkaduhu weligood hal daqiiqad sidaas ka fikiraan Saxaafadda ku jiri kara xuduudaha marketing, Waxay si fudud isugu dhejinayaan meel dhexaad ah wareegga buunbuunin ee soo socda.
Tags: saxafiga brandContent Suuqistaraatiijiyada contentCroresheeko
Nov 21, 2012 at 11: 47 AM
Wow Marty - adigaa qodbay. Waxaan u maleynayaa inay jiraan dhibco hubris ah oo leh astaamo aaminsan in ay yihiin xarunta fiiro gaar ah. Akhristayaashu marwalba way ogyihiin inay aqrinayaan qalabka suuqgeynta! waa sababta ay shirkaduhu ugu baahan yihiin inay yeeshaan istiraatiijiyaddooda u gaarka ah iyo sidoo kale istiraatiijiyad fidin ah!
Nov 21, 2012 saacadu markay tahay 2:02 PM
Boostada weyn ee Marty, laakiin waxaan ka walwalayaa doodaha ku saabsan shirkadaha sida Coke oo si saraaxad leh wax uga qabtay wax kasta oo qaldan markay tahay… si fiican wax walboo hore past weligoodba.
Nov 21, 2012 saacadu markay tahay 2:34 PM
Horeba waan u dhaleeceyn jiray iyaga, laakiin waxaa jira suurtagalnimada inaan ku arki doonno dhibic gudaha gudaheeda ah, haddii ujeeddada suxufiga shirkadaha si dhab ah loo eego. Waxaan u maleynayaa in su'aashu tahay haddii dadaalka noocan ahi u horseedi karo isbeddel gudaha ah oo gaabis ah, mise waxay noqon doontaa uun joornaal kale oo internetka ah. Inta ay ku jiraan, soo celi 6.5 wiqiyadood oo ah dhalooyinkii hore ee la soo celin karay, oo isticmaal sonkorta dhabta ah.
Nov 22, 2012 saacadu markay tahay 9:22 PM
Marty - Waxaan helay qoraalkan HBR isagoo ka hadlaya kala-guurka Coca-Cola sidoo kale - xiiso xiiso leh ayaa ku jirta. http://blogs.hbr.org/cs/2011/04/coca-colas_marketing_shift_fro.html
Nov 30, 2012 at 1: 11 AM
Waa lagama maarmaan in ganacsiyada yaryar badankood ay leeyihiin bog
dhisaan astaantooda, la xiriiraan macaamiisha iyo taageerayaasha, iyo inay dayactiraan
wanaagsan PR. Iyadoo aan la helin joogitaanka warbaahinta bulshada, meheradda ayaa looga tagi karaa iyaga
tartamayaasha, gaar ahaan kuwa doortay inay si buuxda u qaataan warbaahinta bulshada.
Nov 30, 2012 saacadu markay tahay 5:04 PM
Si buuxda ugama raacsani, maadaama aan aaminsanahay in magacyadu ay ku bixin karaan xoogaa qiyaas ah ujeedo ku jirta mawduucooda, gaar ahaan haddii waxyaabahaasi ku xididaysan yihiin utility, halkii ay ka ahaan lahayd dhiirrigelin. Kaliya waa dhaqan ahaan inaysan ku jirin DNA-da ugu badan ee noocaas ah inay sidaa sameyso. Post sare Marty. Waan helay fikirka.
3, 2012 at 10: 34 AM
Mahadsanid Jay. Waxaan si joogto ah ugulaabanayaa mantra-kaaga inaad waxtar leedahay, mararka qaarna way adkaan kartaa suuq geynta inay u wareegto maskaxdan. Waxaan ka aragnay Edleman Trust Barometer in macaamiisha ay kalsooni dheeraad ah saaraan asxaabtooda, goobahooda bulsheed, iyo in ka yar waxa shirkadaha ay qabanayaan. Waxaan sidoo kale aaminsanahay in ururada ay bilaabi karaan inay badalaan fikradahaas, laakiin waa hab gaabis ah. Dadyowga sida Tom Foremski waxay safka hore kaga jiraan adduunkan cusub ee geesinimada leh ee saxaafadda saxaafadda, kana soo horjeedda warbaahinta shirkadaha. 2013 waxay u noqon doontaa sanad weyn dadaalada ku saabsan sida shirkadaha u maraan wadada jilicsan ee aaminka.